Masonto onke Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we-Forex Pivot Point Masonto onke Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu
Masonto onke Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu
Agasti 24, 2019
1 Masonto onke Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu
1.1 Amaphoyinti we-Pivot - Ithuluzi Elikhulu Lokwenza Amamaki Nama-Choppy
1.2.1 Thenga (Long) Isethaphu Trade
1.2.2 Thengisa (Short) Isethaphu Trade
1.3.1 Forex Ukuhweba Systems Ukufakwa Imiyalelo
1.3.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ipulatifomu Yokuhweba
1.3.3 Ungayifaka kanjani I-Pivot Bounce Forex Ukuhweba Kweviki?
Izikhathi eziningi, lapho wethulwa ishadi elinqunu, kubukeka sengathi sibheke eshadini elinganaki. Intengo ibonakala ihamba ngendlela engalindelekanga kakhulu, njengomuntu odakwayo uthatha uhambo lokuya ngokungahleliwe izinyathelo nezinyathelo zalo ziqonde kuyo yonke indawo. Okungenani yilokho iningi labadayisi abasha elalizokubona.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi esimweni semakethe esinqenayo noma se-choppy. Intengo yayihlehlela phezulu naphansi, Ukuguqula izinkomba kaningi ngamanani entengo angahlelekanga kakhulu. Lesi mhlawumbe yisizathu esenza ukuthi abathengisi abasha be-newbie bazame ukugwema ukuthengisa imakethe ebanzi noma ye-choppy.
Kepha kunendlela yokwenza umqondo walezi ezinganakeki, uhlobo lwamashadi abonakala edakiwe.
Amaphoyinti we-Pivot - Ithuluzi Elikhulu Lokwenza Amamaki Nama-Choppy
Kunamathuluzi amaningi (izinkomba zokuhweba) etholakala kumthengisi ukusiza ukwenza umqondo wemakethe. Izinkomba ezisiza ukwenza umqondo ngokuqondiswa kwendlela yemakethe nendawo enentshisekelo kuyo. Kukhona okuphathelene nokuhamba, Ukubuyiselwa kweFibonacci, MACD, njll. Noma kunjalo, akuzona zonke izinkomba ezinhle ngazo zonke izikhathi. Ngezinye izikhathi, endaweni yemakethe engashintshi, ezinye izinkomba azikwazi ukwenza umsebenzi. Kufanele usebenzise inkomba efanelekile yesimo semakethe othengisa kuyo.
Isikhombisi sePivot Point iyithuluzi elihle ongalisebenzisa endaweni emakethe ebanzi noma e-choppy. Kuhle, abathengisi abaningi abangochwepheshe bayayisebenzisa. Kuyinkomba ebalwa ngokwezibalo ekhomba izindawo ezithakazelayo. Izindawo lapho intengo ingagxuma noma iqhume. Lokhu kumakwe ngemigqa noma imigqa evundlile. Umugqa ophakathi nendawo yiPivot Point (PP). Ngaphezulu kwamazinga amathathu okumelana - R1, R2 no-R3. Ngezansi kunamazinga wokusekelwa amathathu - S1, I-S2 ne-S3. Izikhathi eziningi, njengoba intengo isondela kula mazinga, kwenzeka into ethokozisayo.
Amaphoyinti we-Pivot ahle kakhulu ezimakethe ezisukela noma ezi-choppy ngenxa yomqondo olula oqinayo ngisho nakulezi zinhlobo zezimakethi - I-Def Reversion. I-reversion ingumbono wokuthi intengo ihlala ibuyela emuva kusilinganiso sayo. Ukudlula kude kudedela kude, lapho amathuba okuthi abuyele esimeni esimaphakathi. Njengoba kunikezwe ukuthi iPivot Point uhlobo oluthile lwesilinganiso sentengo, kunethuba elihle lokuthi intengo ingabuyela kulo.
Olunye uphawu olusebenzela amaphoyinti wePivot ukuthi abathengisi abaningi abaqeqeshiwe nabasebenza ezikhungweni ezithile bakubheka njengokwenza kwabo. Ngenxa yalokhu, ukuhweba ngokusekelwe kumaphuzu wePivot kuba isiprofetho esizifezekisayo. Iqiniso lokuthi ungahweba ngakolunye uhlangothi olufana nalabafana abakhulu kuphela unezela ubuhle ekuthengiseni usebenzisa amaPivot Points.
Umqondo ngemuva kwaleli qhinga ukusebenzisa amazinga okusekelwa nawokumelana njengezindawo ezingaba khona lapho intengo ingahle inyukele khona. Uma inani lingaphansi kwephoyinti le-pivot, lapho-ke sifuna ukukhishwa kwelinye lamazinga okusekelwa. Okuqondiwe kuzoba izinga elilandelayo ngaphezulu kwalo. Uma ngakolunye uhlangothi, Intengo ingaphezulu kwephoyinti le-pivot, lapho-ke sesifuna i-bounce off level yokumelana ngeveli elilandelayo njengethagethi.
Kepha sinquma kanjani ukuthi intengo isizobuyela emuva? Ukuze wenze lokhu, sizobe sisebenzisa iphethini enhle yamandulo yamakhandlela. Amaphethini we-Pin bar ayizinkomba ezinhle kakhulu zokubuyela emuva okungenzeka. Iqiniso nje lokuthi imizwa ishintshile ngaphakathi kwenkathi eyodwa iyinkomba eqinile yokuthi amagesi aseshintshile, futhi ukushintshwa kungenzeka kwenzeke. Futhi, izintambo ziyinkomba yokwenqatshwa kwentengo. Ukuba ne-wick ethinta isekela noma izinga lokumelana nakho kuyinkomba yokuthi imakethe kungenzeka inqabe intengo kulolo sizo noma ukumelana okuthile.
Ngakho-ke, njengoba intengo isondela kwelinye lamazinga wokusekelwa noma wokumelana, sibheke iphethini yephini yebhagi ekhomba ezingeni eliphakathi lePivot Point. Uma kuvela ibha yephini, kuhle, sinokusetha kokuhweba. Uma kungekho pini bar okwenzekayo, lapho-ke kulungile. Sihlala emaphethelweni silinde ithuba elizayo.
Isikhathi Sokuhweba: yimuphi (mhlawumbe ngesikhathi lapho imakethe yemali ivulekile)
Intengo kufanele ibe ngaphansi kwephuzu leviki leviki (igolide)
Lindela intengo ukuthi isondele kwelinye lamazinga okusekelwa (red)
Lindela iphethini yebhagi yephiniphu ukuthi ihlangane ne-wick ethinta izinga lokusekelwa
Faka i-oda lokuthenga emakethe ekugcineni kwekhandlela le-pin bar
Setha ukulahleka kokumisa ngezansi kwezansi lekhandlela le-bar bar
Setha ithagethi yenzuzo izimbambo ezimbalwa ngezansi kweleveli elandelayo, kungaba iphuzu pivot noma ileveli yokusekela
Intengo kufanele ibe ngaphezulu kwephuzu le-pivot leviki (igolide)
Lindela intengo ukuthi isondele kwelinye lamazinga wokumelana (oluhlaza okwesibhakabhaka)
Lindela iphethini yebhagi yephiniphu ukuba ihlangane ne-wick ethinta izinga lokumelana
Setha ukulahleka kokumisa ngaphezulu kokuphakeme kwekhandlela le-bar bar
Setha ithagethi yenzuzo izimbambo ezimbalwa ngaphezulu kwezinga elilandelayo, kungaba iphoyinti le-pivot noma izinga lokumelana
Leli isu elisetshenziswa kakhulu phakathi kwabahwebi abaningi. Amandla ayo ikakhulu esilinganisweni sawo esikhulu somvuzo. Ngenxa yebanga intengo engahamba ngalo phakathi kwamazinga, ukubuya kaningi kungaba amafolda amaningi uma kuqhathaniswa nengozi yokulahleka kokuma.
Noma kunjalo, akuwona wonke ama-setup azosebenza. Kunezikhathi lapho ukusetha kungenzeka, kodwa intengo nje ayipheleli emazingeni okusekelwa noma okumelana nawo. Akukho esingakwenza ngalokho. Iyingxenye nje yokuhweba. Kodwa-ke, singabheka umongo wekhandlela le-bar bar. Ingabe kwenzeka ngesikhathi lapho imakethe yasekhaya yenye yezimali ivulekile? Ngabe kwenzeka ekuqaleni kweseshini yokuhweba noma ngabe njengoba imakethe yayisaphumile noma isizovala? Kwakungenxa yokukhishwa kwezindaba eziyisisekelo? Njll.
Kukhona nezikhathi lapho intengo ibizokwehla kepha ingafinyeleli esiliqondisile. Lokhu kujwayelekile ngoba izinga elilandelayo yizindawo lapho intengo ingagxuma khona. Lesi isizathu esenza ukuthi sibeke imigomo yethu izimbotshana ezimbalwa ngaphambi kwayo. Ungase futhi usebenzise uhlobo oluthile lokuma kokulandela umkhondo ukuze uvikele inzuzo yakho.
Yize kunezimo lapho ukusetha kungahluleka khona, isemukelekile futhi nangomhwebi ofanele, kungasho inzuzo enkulu ngenxa yesilinganiso esiphakeme somvuzo.
Funda lo mqondo. Leli su lingase lingelakho.
Amaviki onke wePivot Bounce Forex Ukuhweba Isu yinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu Lamaviki onke kunikeza ithuba lokuthola ubuntu obuhlukahlukene namaphethini kumandla entengo angabonakali ngamehlo anqunu.
Ungayifaka kanjani I-Pivot Bounce Forex Ukuhweba Kweviki?
Landa i-Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu Lamaviki onke
Hambisa ngakwesokudla ukuze ukhethe i-Pivot Bounce Forex Ukuhweba Ngeviki
Uzobona i-Weekly Pivot Bounce Forex Ukuhweba Isu Kuyatholakala Eshadini lakho
Isiqephu esedluleIvolumu Maka futhi Pennants Ukuhweba Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayoEagleFX ukubuyekeza
I-SAR HA I-Smooth Forex Trading Isu
I-Pivot Bounce Forex Day Trading Strategy